Ny fampinonoana - eny na tsia? Inona no tsara indrindra ho an'ny zanako?
Fanamafisana ny breastmilk
Ny fahatsapana fiarovana rehefa miteraka
Nahoana no tokony hampinono ny reny ny zanany?
Tokony hampinono ny zanako ve aho? Fanontaniana iray no anontanian'ny renim-pianakaviana maro. Fa ny sasany dia zavatra mazava, fa tsy ho an'ny hafa. Maro no manontany tena raha toa ka "tsara" sy ny fomba hanaovana izany rehefa misy ny fampinono.
Ny fampinonoan-dreny - resaka fifaliana
Ny zaza voalohany indrindra dia matetika no matoky fa ny reny maro manana traikefa dia mahatsikaiky foana ny zavatra tsy ampoizina rehefa ny zaza faharoa na fahatelo dia mampiavaka tampoka ny faniriana sy ny fanehoan-kevitra hafa momba ny fampinonoana, toy ireo zokiny.
Tokony hampinono ny zanako ve aho? Fampahalalana sy torohevitra
Ny fampinonoan-tena toy ny fifandraisana tsy misy fifandraisana eo amin'ny reny & zanaka
Na izany aza, ny traikefa ananan'ny reny sy ny mpampivelona dia mampiseho fa ny fikolokoloana na ny fikarakarana ny tazomoka dia tsy dia misy dikany loatra. Satria amin'ny lafiny iray dia misy ny fahalalana, fa amin'ny lafiny iray kosa ilay zaza.
Ary izany dia mamaly fotsiny amin'izany. Ny tanjony, ny filany, ny fahatsapana hanoanana, fa ny faniriana ny fitohanana sy ny filaminana ihany koa dia hamaritra ny fandehanana sy ny fifehezana ny fampinonoana amin'ny fotoana. Raha ny marina, ny olom-bitsy eto an-tany no olona tena manan-danja amin'ny fampinonoana.
Raha matoky ny zanany ny reniny, mifandray amin'izy io, ary manana fahatokisana, izany no fomba tsara indrindra handresena ireo olana voalohany. Izany koa dia mihatra amin'ny fanontaniana mikasika ny faharetan'ny fotoana tokony hampijaliana azy. Ary indray, tsy misy fitsipika, tsy misy fitsipika. Raha mbola tiany ny reny sy ny zaza dia tsara izany.
Raha mitaky ny ilana ny lafiny iray, ny ankamaroan'ny fotoana dia maneho hevitra amin'ny ankapobeny ihany koa ny fahatsapana fa fotoana tokony hijanonana. Ny fifandraisana misy eo amin'ny reny sy ny zanaka dia saiky mikasika ny fisainana sy ny fihetseham-po, izay tsy mitovy amin'ny fampinonoana.
Raha raisina amin'ny lafiny hafa amin'ny sakafo ihany koa ny fampinonoana, dia mitohy ny manantitrantitra fa tsy misy solon'an-trondro mitovy amin'ny rononon-jaza. Ny fifangaroan-tsika novolavolaina tao amin'ny varotra dia mifototra amin'ny ronono ombivavy, na soja na mare ary manindrona ny ronono araka izay azo atao. Nefa tsy misy izany firafitra izany.
Satria izy ireo ihany no ahitana ny voka-dratsin'ny hery entina ilainy, indrindra amin'ny tapany voalohany amin'ny taona ho an'ny fiarovana ny akaniny. Ireo dia voarakitra indrindra amin'ny colostrum, ilay antsoina hoe foremilk, izay natolotra tamin'ny andro voalohany taorian'ny nahaterahany. Avy eo dia tonga amin'ny fananganana ny ronono tena izy.
Ity ny singa iray hafa indray tsy mitovy. Eo am-pandehanana ny ravin-kena mankany amin'ny rononon-dreny dia mihena ny voka-dratsin'ny proteinina, mitombo ny voka-bary matavy sy kibo. Ny habetsaky ny vokatra dia miankina amin'ny fangatahana famatsiana, na dia mety ho samy hafa aza ny fangatahana. Ny ronono ihany no mifanaraka tsara amin'ny zavatra ilain'ny zazakely. Ny ronono avy amin'ny ronono dia misy proteinina be loatra ho an'ny zazakely na be loatra molekiolan'ny proteinina, izay mety hanimba ny voa. Noho izany, tsy tokony homena ronono ombivavy mandritra ny taona voalohany amin'ny fiainana. Ny fambolena sy ny voka-bary matavy, etsy ankilany, dia ambany loatra.
Na izany aza, ankoatra ny fanontaniana momba ny sakafo, ny fampinonoana koa dia manatanteraka asa iray hafa: ny fifamatorana ara-pihetseham-po eo amin'ny reny sy ny zaza. Indrindra eo am-piandohana, raha tsy maintsy "mifankahafantatra aloha" ianao, raha toa ka mitady ny lalany ny zaza raha tsy misy fiarovana mafana avy amin'ny vavony Mama ao amin'ny tontolo vaovao ary mbola mila fiarovana betsaka. Ny fampinonoana fotsiny dia manampy amin'ny fampiroboroboana ireo lafiny ireo.
Ny fiterahana dia manome ny fiarovana ny zaza
Ny fifandraisana amam-pitiavana eo amin'ny reny sy ny zanaka, izay entina mandritra ny fampinono, dia sarotra koa ny manolo ny zavatra hafa. Zava-dehibe eto ny tontolon'ny fandriam-pahalemana, hafanana sy fampiononana.
Tsy misy TV na onjam-peo tokony handehanana eny an-dalana, tokony hesorina ny telefaona ary tokony hapetraka mandritra ny herinandro voalohany raha ilaina izany. Amin'ity tontolo ity, afaka mahazo fifanakaikezana ny roa ary samy manorina fifandraisana akaiky.
Mazava ho azy fa misy lafiny tena azo ampiharina koa ny fampinonoana. Ao mandrakariva ary na aiza na aiza ny sakafo mahazatra, amin'ny fitambarany sy ny hafanana mety, voaomana maimaim-poana sy tsy misy mikarama. Tsy misy fitaterana tavoahangy, tavoahangy mafana ary fitaovana hafa ilaina. Izany koa dia mamela ny reny hanamora ny fahaiza-manao sy ny ezaka fandaminana.
Amin'ny ankapobeny, izy io dia namolavola ny fahendren'ny natiora ka ny fampinonoana dia ny fanombohana tsara indrindra eo amin'ny fiainana ho an'ny zaza madinika iray. Sakafo, fihetseham-po ary logistika. Mazava ho azy fa misy ireo vehivavy tsy afaka na tsy te hampinono. Io farany io dia tsara ihany koa, satria tsy tokony hanerena ny fihetseham-ponao manokana. Tsy mety amin'ny lafiny roa izany. Na izany aza, raha misy faniriana sy fahafaha-maotina, dia tokony alefa any amin'ny vahaolana artificielle izany.
Maro ireo reny miandry no manontany tena raha tokony hampinono izy ireo na tsia. Ny ankamaroan'ny dokotera dia hanome azy mazava tsara.
Ny fampinonoan-drivotra dia tena atolotra ho an'ny ankamaroan'ny reny vaovao. Mandra-1867 avy Henri Nestle zazakely sakafo dia nanjary ny Nestle Company, fampinonoana no hany safidy azo iainana ho an'ny sakafo ny zaza. Raha tsy afaka mamelona ny zanany ny renim-pianakaviana iray, dia hita fa nikarakara ilay zazakely ho an'io reny io ilay mpitsabo mpanampy.
Ny fampidirana sakafo ho an'ny zazakely dia noraisina satria midika izany fa misy fomba hafa mahasalama mahasoa kokoa ho an'ny zazakely izay tsy afaka nampinono azy ireo reny.
Saingy teo an-dalam-pandehanana ny fampinonoan-dreny, dia kely dia kely ny fampinonoan-dreny ary ny sakafo zazakely dia nanjary fomba tiany indrindra hampiofanana zazakely. Ahoana no nahatonga izany?
Ny olona sasany dia mihevitra fa fanentanana ara-barotra mahomby avy amin'ny mpamokatra sakafo ho an'ny zazakely. Ny olona hafa dia mino fa vokatry ny fitomboan'ny fananganana ny reny eo amin'ny toeram-piasana, ka mahatonga azy ireo ho sarotra ny hampinono zaza.
Soa ihany fa ny fironana amin'izao fotoana izao toy ny heviny fa ny zaza ny reny breastfeed, na dia izany ihany nandritra ny volana vitsivitsy. rehefa teraka ny zaza voalohany, fampinonoana dia nanohana sy ny tombontsoa ho ahy dia nanazava tsara, nefa tsy mbola be dia be ny tsy fankasitrahana, rehefa reny sahy breastfeed eny imasom-bahoaka. Toa ho tsara fotsiny, raha reny mampinono any amin'ny toerana manokana izay tsy misy hafa afaka mahita azy ireo. Ny hany fomba azo natao dia ny nitera-dreny hijanona tao an-trano nandritra ny fotoana iray ary tsy hivoaka ho an'ny daholobe, izay tena mahatsikaiky.
Ny reniko dia iray amin'ireo olona izay tsy faly tamin'ny fanapahan-kevitra noraisiko. Ny antony tsy tiany dia ny nankahalany izany rehefa nikarakara ny zanako tany an-toeran-kafa aho fa tsy tao an-tranoko tsy misy olon-kafa. Na izany aza, tsy niraharaha ny tsy fankasitrahana rehetra aho ary tena faly fa nanao izany. Ny zanako lahy dia tsy manana olana amin'ny tsy fahampian'ny aretina rehetra izay nanindrona ahy nandritra ny androm-piainako (tsy nitera-bady aho tamin'ny mbola kely), ary mieritreritra aho fa ny fiompiana dia niaro azy. Ny fikarohana dia naneho fa ny fiarovana sy ny fanoherana ny tsy fahampiana dia iray amin'ireo tombontsoa maro amin'ny fampinonoana.
Na dia manoro hevitra ny manam-pahaizana aza ny tazomoka mandritra ny enim-bolana, fara fahakeliny, ny tazomoka dia afaka mitondra soa lehibe ho an'ny reny sy ny zaza mandritra ny volana vitsivitsy. Voalohany, sakafo ampy tsara ho an'ny zazakely izany, satria ny zavakanto no nanao izany. Midika izany fa misy zaza tsy dia manana olana loatra amin'ny rononon-jaza noho ny sakafo amin'ny zazakely.
Inona avy no soa entin'ny fampinonoana ho an'ny reny?
Sarotra kokoa noho ny zazakely. Ny fampinonoana dia afaka manampy ny reny vaovao koa hamono vohoka toy ny reny mitondra ny rononon-jaza mirehitra bebe kokoa ny kaloria. Ny fampinonoana koa dia manampy ny tranon-jaza hiverina haingana kokoa ny habeny, satria ny oxytocine dia alefa any amin'ny rà ary raha misy reny mampinono.
Inona avy ireo tombontsoa azo amin'ny fampinonoan-janaka?
Ny zaza iray dia tsy dia mahazatra loatra amin'ny rononon-jaza noho ny an'ny zazakely. Ankoatr'izany, ny colostrum, izay manome zaza tsy ampy ny viriosy sy bakteria, dia eo amin'ny rononon-jaza mandritra ny andro maromaro aorian'ny nahaterahan'ny zazakely. Ny fianarana dia naneho fa ny zaza tsy ampy taona dia tsy dia marary loatra noho ny zaza, ny tsy fahampian-tsakafo (toy ny otrikaretina sofina) ary ny tsy fahampian'ny viriosy. Izany dia satria ny rononon-jaza dia misy antikoly izay miaro ny zazakely amin'ny aretina sy ny aretina.
Faran'izay tsara, ary mora ampiasaina tratra mitempo manosika ny ho mora kokoa ho an'ny reny ny mba fenoy rononon-dreny ho an'ny zaza sy ny fitehirizana, rehefa ry zareo ao an-trano - dia zavatra lehibe ho an'ny reny izay tsy maintsy hiverina hiasa, fa mbola te-hanome ny zanany amin'ny rononon-dreny.
Fiterahana - Mampidira ray